I-Glasgow Guest House - I-Airbnb
I-Glasgow Guest House
North Bend, Oregon, i-United States
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Kathleen
U-Kathleen Ungumbungazi ovelele
I-Glasgow Guest House yethu iyindlwana engu-325 sq ft ngemuva kwendlu yethu e-Coos Bay. Ifakwe umbhede wendlovukazi, i-dresser, i-smart TV kanye nekhishi. Ikhishi linefriji elilingana nefulethi, ipuleti elishisayo, i-electric skillet kanye ne-microwave. Ekhabetheni kukhona i-convection/oven encane. Isikhala sifudumele, sihlanzekile futhi sithulile, sine-Douglas fir flooring yemvelo kanye nokugeza okufakwe amathayela.
Likhanya futhi lijabule, ikotishi lethu lifakwe izihlalo ezimbili ezithokomele ze-Poang ezivela ku-IKEA, isigqoko sakudala esivela endaweni yokulala yase-Mills College kanye nebha ependwe ngemibalabala. Okunye futhi okuyingxenye yokuhlobisa: itafula lomtapo wezincwadi we-oki elidala kanye netafula elincane lezinkuni eligoqwayo, kokubili okwakungekagogo wami. Eminyakeni embalwa edlule, nganginomngane womculi owayependa itafula elincane futhi linikeze indawo okugxilwe kuyo ngohlelo lombala.
I-TV engu- 36" ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix
4.92 · 191 okushiwo abanye
Indawo yaseGlasgow ithathwa njengendawo efiselekayo ngenxa yegquma ekhona, elivikela le ndawo emoyeni ovunguzayo wasehlobo kwesinye isikhathi. Singaphansi kwamamayela angu-4 ukusuka e-Horsfall Beach, ngaphansi kwemizuzu engama-30 ukusuka e-Sunset Bay State Park, e-Bastendorff Beach, nasezingadini zomlando zase-Shore Acres. Sikude ngemizuzu engama-45 namamayela angu-30 kusukela ezinsizeni zase-Bandon, e-Oregon: idolobha elinemibala elidala elinamathuba okuthenga ayingqayizivele, ulwandle oluhle, izinketho ezimbalwa zokudla ezinhle, kanye ne-Bandon Dunes Golf Resort edume umhlaba wonke. Indawo yegalofu ikhonjwe njengenye yezindawo ezihamba phambili emhlabeni ezixhumanisa igalofu.
Ngangingumnakekeli kamama wami osekhulile futhi sasihamba siphindela phakathi kwekhaya lakhe nelethu. Ikotishi lakhiwe ukuze kuthi lapho thina (umyeni wami uJohn, umama nomama) sifika ekhaya, sibe nendawo yokuhlala ngaphandle kokuphazamisa abaqashi bethu endlini. Uma sisekhaya, okuyinto esivame ukuba yiyo, sihlala sitholakala nganoma yiluphi usizo olungase ludingeke.
Ngangingumnakekeli kamama wami osekhulile futhi sasihamba siphindela phakathi kwekhaya lakhe nelethu. Ikotishi lakhiwe ukuze kuthi lapho thina (umyeni wami uJohn, umama nomama) sif…
UKathleen Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- North Bend namaphethelo